Warren Buffet | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Warren Buffet
blog creative wirting
ရုပ်မြင်သံကြားလှိုင်း CNBC က ကမ္ဘာ့ဒုတိယအချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့၊ ထောက်ပံ့ကြေးငွေပေါင်း သန်း(၃၁ဝ,၀၀၀) လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ Warren Buffet ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ သူ့ဘဝအကြောင်းတချို့ကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
Warren Buffet ဟာ (၁၁)နှစ်အရွယ်မှာ ပထမဦးဆုံးသော stockကို ဝယ်ခဲ့တယ်။ ဒါကို စတင်တာနောက်ကျတယ်လို့ အခုချိန်မှာ သူနောင်တရနေခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက stock ဈေးတွေဟာ အရမ်းဈေးပေါလို့ဖြစ်တယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတတ်ဖို့ သင့်ကလေးတွေကို အားပေးပါ။
(၁၄)နှစ်အရွယ်မှာ Warren Buffet ဟာ သတင်းစာပို့လို့ စုဆောင်းရရှိတဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ ခြံတစ်ခြံဝယ်ခဲ့တယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်စုဆောင်းထားတာနဲ့ ပစ္စည်းအများအပြား ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးတွေကို စုဆောင်း၊ ဝယ်ယူတတ်ဖို့ အားပေးပါ။
Warren Buffet ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (၅ဝ)ကျော် မင်္ဂလာဆောင်ပြီးက ဝယ်ထားတဲ့ အိမ်ခန်း၃ခန်းသာပါတဲ့ နေအိမ်မှာပဲ နေနေဆဲဖြစ်တယ်။ ခြံဝင်းစည်းရိုးခတ်မထားတဲ့ ဒီအိမ်လေးဟာ သူ့လိုအင်တွေကို ပြီးပြည့်စုံစေခဲ့ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ “ကိုယ်တကယ်လိုအပ်”တဲ့ အတိုင်းအတာထက် ကျော်လွန်တဲ့ပစ္စည်းကို မဝယ်ပါနဲ့။ သင့်ကလေးတွေကို ဒီလိုတွေးတောတတ်ဖို့၊ လုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ အားပေးပါ။
Warren Buffet ဟာ ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းလေ့ရှိတယ်။ ဒရိုက်ဘာမထားသလို ကိုယ်ရံတော်လည်း သူ့မှာမရှိဘူး။ ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လုပ်ဆောင်ပါ။
Warren Buffet ဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဂျက်လေယာဉ်ကုမ္ပဏီကို ပိုင်ဆိုင်သည့်တိုင် ဘယ်တော့မှ ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ် မစီးသူဖြစ်တယ်။ စီးပွါးရေးနည်းလမ်းကျကျ အရာရာပြီးစီးနိုင်ဖို့ သူအမြဲတွေးတောလေ့ရှိတယ်။
သူ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Berkshire Hathaway မှာ ကုမ္ပဏီပေါင်း (၆၃)ခုရှိတယ်။ သူဟာ ကုမ္ပဏီက စီမံခန့်ခွဲရေး အကြီးအကဲတွေကို တစ်နှစ်မှာ စာတစ်စောင်ရေးပို့လေ့ရှိတယ်။ အဲဒီစာထဲမှာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေပါတယ်။ သူဟာ ဘယ်တော့မှ လုပ်ငန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ် အစည်းအဝေးတွေ မလုပ်သလို ဖုန်းဆက်သူလည်း မဟုတ်ဘူး။ သင့်တော်တဲ့လူအတွက် သင့်တော်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်စေတယ်။
(၁) အစုရှင်ရဲ့ငွေတွေကို မဆုံးရှုံးစေနဲ့။
(၂) နံပါတ်(၁)စည်းကမ်းချက်ကို မမေ့ပါနဲ့။
ရည်မှန်းချက်ထားပြီး အဲဒီရည်မှန်းချက်အတိုင်း သေချာလုပ်ဆောင်ကြဖို့ မမေ့နဲ့လို့ဆိုပါတယ်။
Warren Buffet ဟာ လက်ကိုင်ဖုန်းမကိုင်သလို သူ့အလုပ်စားပွဲမှာလည်း ကွန်ပျူတာမထားပါဘူး။
အထက်တန်းလွှာ လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်ပွဲတွေမှာ သူမပါသလို သူ့အားလပ်ချိန်က ပေါက်ပေါက်(Popcorn)တချို့နဲ့ တီဗီကြည့်တာပဲဖြစ်တယ်။ မထုတ်ဖော်၊ မကြွားဝါပါနဲ့။ စစ်မှန်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်အတိုင်းနေပြီး ကိုယ်လုပ်သမျှအရာပေါ် သာယာကြည်နူးပါ။
ဘီဂိတ်လ်က ကမ္ဘာပေါ် အချမ်းသာဆုံးလူဖြစ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့(၅)နှစ်မှာ ဘီဂိတ်လ်နဲ့ Warren Buffet တို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဆုံကြတယ်။ Warren Buffet ဟာ သူနဲ့ အရာရာမတူသူလို့ ဘီဂိတ်လ်က ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲကို အချိန်တစ်နာရီပဲ သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ (၁ဝ)နာရီကျော်ကြာ သူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ဘီဂိတ်လ်ဟာ Buffet ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။
လူငယ်တွေကို Buffet ရဲ့ အကြံပေးချက်ကး
အကြွေးဝယ်ကတ် (Credit card)နဲ့ ဝေးဝေးနေပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး အောက်ကအချက်တွေကို မှတ်ထားပါ။
(၁) ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းက လူတွေကို မဖန်ဆင်းဘူး၊ လူတွေကသာ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို ဖန်ဆင်းတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းပါ။
(၂) လူများပြောသလို လိုက်မလုပ်နဲ့၊ များများနားထောင်ပြီး အကောင်းဆုံးလို့ ကိုယ်ထင်တဲ့အရာကို လုပ်ပါ။
(၃) နာမည်ကြီးတံဆိပ်တွေနောက် မလိုက်နဲ့။ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်ပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ အဝတ်အစားကို ဝတ်ပါ။ ငွေကြေးတွေကို မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအပေါ် မသုံးဖြုန်းပါနဲ့။ တကယ့်ငွေကြေးလိုအပ်တဲ့ လူတွေအပေါ် ငွေကိုသုံးပါ။
(၄) ဒါဟာ သင့်ကိုယ်ပိုင် ဘဝဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ သင့်ဘဝကို တခြားလူနဲ့ အထိန်းချုပ်ခံမလဲ?
အပျော်ရွှင်ဆုံးလူဆိုတာ အကောင်းဆုံးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားချင်မှ ပိုင်ဆိုင်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဘဝလမ်းတစ်လျှောက် တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ အရာတစ်ခုတိုင်းကို သူတို့တန်ဖိုးထားတယ်။ ဒီလို လူ့ဘဝလမ်းကို ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်ကြပါစို့!
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလို အကျိုးရှိတဲ့ စာလေးတွေ များများတင်ပေးပါ။
September 16, 2010. က smytu1996 တင်ထားပြီးပါပြီ။ http://myanmargazette.net/2010/economic-news-international-news-news-industry-people-in-the-news-us-news-news/25185 မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ copy & paste သိပ်မလုပ်စေချင်ပါ။